July 17, 2021 - Celegroup
ကိုဗစ် တအိမ်လုံး ပျောက်ကင်းသွားလို့ အများသိ‌အောင် တင်ပေးပါဆိုလို့
July 17, 2021 cele group 0
သူငယ်ချင်းရဲ့ အမ တအိမ်လုံး ပျောက်ကင်းသွားလို့ အများသိ‌အောင် တင်ပေးပါဆိုလို့ ဆေးဖော်စပ်ပုံ – ပထမဦးစွာ ရှောက်သီးများကိုရေဆေးပါ။ မိမိလက်ကိုလည်း ‌ရေဆေးပါ။ ပြီးသည်နှင့် ရှောက်သီးများပေါ်က ရေများကို တစ်ရှူးနှင့် ပြောင်စင်အောင် ပြန်သုတ်ပါ။ လက်မှရေများကိုလည်း ပြောင်စင်အောင်သုတ်ပါ။ ရေ လုံးဝ မကျန်ပါစေနှင့်။ – ပြီးသည်နှင့် ရှောက်သီးများကို အရည်ညှစ်ပါ။ (Blender ၊ ကြိတ်စက် ၊ ညှစ်စက် စသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ အစေ့ […]
ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးနဲ့ ဆုံခဲ့ရင် သိပ်မစဥ်းစားနဲ့တော့
ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးနဲ့ ဆုံခဲ့ရင် သိပ်မစဉ်းစားနဲ့တော့ ယောကျာ်း ဆိုတာဘယ်လောက်ရာထူးအာဏာရှိရှိအောင်မြင်မူတွေဘယ်လောက်ပဲရရငွေကြေးဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာနေနေပညာတွေဘယ်လိုပဲတတ်တတ် အရှက်တရားမရှိ,ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းခဲ့ရင်အလကားပါပဲ ယောင်္ကျားတစ်ချိူ့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဖောက်ပြားမူတွေကိုငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့ဖုံးဖိပြီးရာထူးဂုဏ်အရှိန်အဝါတွေနဲ့ဆီးကာလို့လုံနိုင်လှပြီလို့ထင်တတ်ကြတယ်။ လူ့ပါးစပ်တစ်ပေါက်ဆိုတာဆန်တစ်တင်းနဲ့ဖို့တောင်မလုံနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့စာရိတ္တပျက်ပြားမူတွေကိုအများကမသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာသာရှိမယ်,မသိပဲနေပါ့မလား? ယောင်္ကျားကောင်းတွေဆိုတာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လူမမြင်ကွယ်ရာမှာရှိခဲ့ရင်တောင်တစ်နပ်စားဉာဏ်နဲ့မကြံစည်ဘူး။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရေလာမြောင်းပေးလာရင်တောင်မသာယာတတ်ဘူး။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအခွင့်အရေးပေးခဲ့ရင်တောင်အခွင့်အရေးမယူဘူး။ ယောင်္ကျားကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူကိုအခွင့်အရေးရရင်တောင်အခွင့်အရေးမယူပဲ စည်းဘောင်အတွင်းမှာတန်ဖိုးထားမူနဲ့သစ္စာရှိတတ်ကြတယ်။ တစ်ကယ့်ယောင်္ကျားကောင်းတွေဆိုတာဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်သင့်တာကိုဦးစားပေးလို့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားပြီးအချစ်ဆိုတာကိုဦးနှောက်နဲ့ထိန်းချုပ်လို့ကိုယ့်သမိုင်းကိုလှပအောင်ရေးဆွဲနိုင်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။ Nan Khin May Win (Credit) Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ဒီလိုေယာက်ာ္းမ်ိဳးနဲ႔ ဆုံခဲ့ရင္ သိပ္မစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့ ေယာက်ာ္း ဆိုတာဘယ္ေလာက္ရာထူးအာဏာရွိရွိေအာင္ျမင္မူေတြဘယ္ေလာက္ပဲရရေငြေၾကးဥစၥာေတြဘယ္ေလာက္ပဲခ်မ္းသာေနေနပညာေတြဘယ္လိုပဲတတ္တတ္ အရွက္တရားမရွိ,ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းခဲ့ရင္အလကားပါပဲ ေယာက်ၤားတစ္ခ်ိဴ႕ကကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္က်င့္တရားေဖာက္ျပားမူေတြကိုေငြေၾကးဥစၥာေတြနဲ႔ဖုံးဖိၿပီးရာထူးဂုဏ္အရွိန္အဝါေတြနဲ႔ဆီးကာလို႔လုံႏိုင္လွၿပီလို႔ထင္တတ္ၾကတယ္။ လူ႔ပါးစပ္တစ္ေပါက္ဆိုတာဆန္တစ္တင္းနဲ႔ဖို႔ေတာင္မလုံႏိုင္တာကိုယ့္ရဲ႕စာရိတၱပ်က္ျပားမူေတြကိုအမ်ားကမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာသာရွိမယ္,မသိပဲေနပါ့မလား? ေယာက်ၤားေကာင္းေတြဆိုတာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔လူမျမင္ကြယ္ရာမွာရွိခဲ့ရင္ေတာင္တစ္နပ္စားဉာဏ္နဲ႔မႀကံစည္ဘူး။မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ေရလာေျမာင္းေပးလာရင္ေတာင္မသာယာတတ္ဘူး။မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကအခြင့္အေရးေပးခဲ့ရင္ေတာင္အခြင့္အေရးမယူဘူး။ ေယာက်ၤားေကာင္းဆိုတာ ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုအခြင့္အေရးရရင္ေတာင္အခြင့္အေရးမယူပဲ စည္းေဘာင္အတြင္းမွာတန္ဖိုးထားမူနဲ႔သစၥာရွိတတ္ၾကတယ္။ တစ္ကယ့္ေယာက်ၤားေကာင္းေတြဆိုတာျဖစ္ခ်င္တာထက္ျဖစ္သင့္တာကိုဦးစားေပးလို႔ကိုယ္က်င့္သိကၡာကိုတန္ဖိုးထားၿပီးအခ်စ္ဆိုတာကိုဦးေႏွာက္နဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ကိုယ့္သမိုင္းကိုလွပေအာင္ေရးဆြဲႏိုင္ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ Nan Khin […]
‘အေမ’ လို႔ ေခၚေနၾကတဲ့ သူစိမ္းအမ်ိဳးသမီးႀကီးအေၾကာင္း
အေမ’ လို့ ေခၚေနၾကတဲ့ သူစိမ္းအမ်ိဳးသမီးႀကီးအေၾကာင္း ၁၉ . ၆ . ၁၉၄၅ မနက္သုံးနာရီ သုံးဆယ့္ငါးမိနစ္မွာစတင္လင္းလက္ခဲ့တဲ့ၾကယ္ …အေမွာင္ဘယ္ေလာက္ဖုံးဖုံး တိမ္ဘယ္ေလာက္အုပ္အုပ္အလင္းလည္းေပးတယ္ လမ္းလည္းျပတယ္။ဘယ္ေတာ့မွေႂကြက်မွာမဟုတ္ေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို့ကို ခဏခဏေႂကြေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ၾကယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေတြ႕လား…ေရႊတိဂုံဘုရားအေနာက္ဘက္မုခ္မွာျမင္လား … အဲ့ဒီကေလးမဒါ .. နိဒါန္းပဲ၊အေဖ့တာဝန္ကိုဆက္ခံၿပီ …အာရွသူရဲေကာင္းသီခ်င္းကိုေအာ္ဆိုရင္းဒီအမ်ိဳးသမီးကို သူရဲေကာင္းျဖစ္ပါေစလို့ေရႊတိဂုံဘုရားႀကီးမွာ ဆုေတာင္းစရာမလိုခဲ့ဘူး။ စက္တင္ဘာ ( ၂၇ ) ၁၉၈၈ဒီအရွုပ္ေတြဇာတ္သိမ္းဖို့ ဒီခ်ဳပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီ။ဒီအတြင္းေရးမွူးမက အိပ္မက္ဆိုးေတြကိုလွုပ္ႏွိုးေပးလိမ့္မယ္ […]
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို အချည်းအနှီးမဖြစ်စေနဲ့
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို အချည်းအနှီးမဖြစ်စေနဲ့ မိုးရွာတိုင်း ရေမကြီးသလိုမိုးခြိမ်းသံ ကြားတိုင်းလဲမိုးကြိုးပစ် မခံရပါဘူး။လေတိုက်တိုင်း ပန်းမကြွေသလိုဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကြောင့်လဲမင်း ဘဝ မသေသွားပါဘူး။ လူဆိုတဲ့ အမျိုးကကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီးသူများ အတင်းကိုပြောတတ်ကြတဲ့ သတ္တဝါတွေပါ။ ခွေးဟောင်တိုင်း ထကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အိပ်ရေး ပျက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားပုံလို ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကိုမင်း အလုအငြင်း လုပ်ပြီးအချိန်ပေး ဖြေရှင်းနေမယ်ဆိုရင်မင်းဘဝ တိုးတက်မှုလမ်းတွေနှောင့်နှေးပြီးမင်းရဲ့အချိန်တွေအချည်းအနှီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အလု အငြင်း ၊ အငြင်းအခုံအတင်း စကားတွေ ပြောတယ်ဆိုတာကအရည်အချင်း မရှိတဲ့သူအသိဉာဏ် […]
ဖုန်းအလင်းရောင်အမြင့်ဆုံးထားသုံးလို့ မျက်စိပျက်မယ့်အရေးကြုံတွေခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေး စမတ်ဖုန်း ကို အလင်းရောင်အမြင့်ဆုံးနဲ့ ၂ နှစ်ကျော်ကြာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ် က အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ သူ့မရဲ့ မျက်ကြည်လွှာမှာ အပေါက်ပေါင်း ၅၀၀ ဖြစ်ပွားတာအပါအဝင် ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ မျက်လုံးပျက်စီးမှုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ OC သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူက အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ချန်းဆိုသူပါ။ သူမဟာ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အသက်မွွေးနေသူဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်အရ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေကို အချိန်မီပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ဖို့ […]
ဒီအချက်တွေက ချစ်သူကနေ မုန်းသူတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်
ဒီအချက်တွေက ချစ်သူကနေ မုန်းသူတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ် ချစ်သူတွေဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းချစ် ကြလို့ပဲချစ်သူလို့ခေါ်တာ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် အချစ်တွေရေရှည် မခိုင်မြဲရင်တော့ ချစ်သူကနေ မုန်းသူတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်။ ဒါဆို အရမ်းချစ် ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ ချစ်သူတွေကို မုန်းသူတွေဖြစ်အောင် ဘယ်အရာတွေက သွေးခွဲ လိုက်တာလဲ။ ငွေ တကယ်ချစ်ရင် ငွေကအရေးမကြီးဘူး ဆိုပြီ းပြောတတ် ကြပါတယ်။ ဒါက စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့စုံတွဲတွေအတွက်တော့ မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်လည်းမခိုင်ဘူး၊ အခက်အခဲကို ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်း […]
မီးပူဖင်မှာ ကပ်နေတဲ့ဂျီး(ချေး)တွေကို ဒီနည်းလေးနဲ့ အလွယ်တကူဖယ်ရှားလိုက်ပါ
မီးပူဖင်မှာ ကပ်နေတဲ့ဂျီး(ချေး)တွေကို ဒီနည်းလေးနဲ့ အလွယ်တကူဖယ်ရှားလိုက်ပါ မီးပူဖင်မှာ ဂျီးတွေတက်နေလား မပူပါနဲ့။ ပါရာစီတမော့ (၂) ပြား ရှိရင် လွယ်ကူပါတယ်ဗျ။ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ဂျီးတွေပေနေတဲ့ အပေါ် မှာ ဆေးပြားလေး တင်ထား၊ မီးပူကို အပူနည်းနည်းပဲထား၊ ခဏနေ အ ရည်ပျော်ကျကုန်ပြီး၊ တစ်ရှူးအကြမ်းလေးနဲ့ ပွတ်လိုက်ရင် မီးပူမှာ ကပ်နေတဲ့ ဂျီးတွေ အကုန်ပြောင်ကုန်တာပါပဲ။အိမ်မှာ လက်တွေ့ စမ်းကြည့်နော်။ ကဲ မလွယ်ဘူးလား။ ဒယ်အိုးအောက်ခြေမှာ […]
ရွာဘက်​​တွေ အောက်စီဂျင်ဗူး မရှိလို့ အားမငယ်ကြပါနဲ့ ဒီလိုလုပ်ပါ
ရွာဘက်​​တွေ အောက်စီဂျင်ဗူး မရှိလို့ အားမငယ်ကြပါနဲ့ ဒီလိုလုပ်ပါ ရေနွေးထဲဂွေးတောက်ရွက် ဆားနဲနဲထည့် ​ဒီပုံအတိုင်းရူပေးပါ။ ဓာတ်​ပုံနှင်​့​ဆေးနည်​း​ပို့လာတဲ့ သူငယ်​ချင်​း​ကျေးဇူးပါ။ Photo crd , La Wone Eain ရြာဘက္​​ေတြ ေအာက္စီဂ်င္ဗူး မရွိလို႔ အားမငယ္ၾကပါနဲ႔ ဒီလုိလုပ္ပါ ေရေႏြးထဲေဂြးေတာက္ရြက္ ဆားနဲနဲထည့္ ​ဒီပုံအတိုင္း႐ူေပးပါ။ ဓာတ္​ပံုႏွင္​့​ေဆးနည္​း​ပို႔လာတဲ့ သူငယ္​ခ်င္​း​ေက်းဇူးပါ။ Photo crd , La Wone Eain ရွာဘက်​​တွေ အောက်စီဂျင်ဗူး မရှိလို့ […]
အောင်မြင်ချင်တဲ့သူဆိုရင် ဒီအရာတွေကို သင့်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ
အောင်မြင်ချင်တဲ့သူဆိုရင် ဒီအရာတွေကို သင့်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ သင့်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်သင့်တဲ့အရာ (၆)ခု ၁။ သင့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကို သင်ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး။တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ကို ဂရုစိုက်လေလေ၊ သင့်ကို ပစ်ထားလေလေပါပဲ။ ဒီတော့ သူတို့ကို လိုက်ဂရုစိုက်နေမှာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုဂရုစိုက်ပါ။ ၂။ လူ့ခွစာများကို ဝေးဝေးက ရှောင်ပါ။တစ်ချို့လူတွေက အခြားသူ ဘာလုပ်လုပ် အမြဲအပြစ်ပြောနေတတ်တယ်။ဘုကလန့်တိုက်တတ်တယ်၊ ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ စိတ်ထဲရှိ ရှိသလို မဆင်မခြင်စကားပြောတတ်ကြတယ်။ ဒီလို အဆိုးမြင်ဝါဒီရှိသူများကို ရှောင်ရှားပါ။ […]
တရားကို ေတးဆို ၊ အေဖကိုသားကဆဲေဆြမ်ိဳးထဲက ဓါးျပတိုက္ ၊ မိုက္လွ်င္ေသာတာပန္မေကာင္းႀကံလွ်င္ သမာဓိ ၊ေရႊရွိမွ လူလိမၼာလိမ္ႏိုင္မွ သစၥာရွင္ ၊ ပညာရွင္ကို ပယ္၍ထားအခ်စ္ဆံုးက သစၥာပ်က္ ၊႐ိုးသားသူကို အ႐ူးဆိုအပ်ိဳငယ္က လင္ေနေစာ ၊အကၤ်ီပါးနဲ႕ ဥပုသ္သည္ဇရပ္အလယ္ ကို႕ယို႕ကားယား ၊ အမ်ိဳးသမီးေကာင္းက ပိုက္ဆံရွာအပ်ိဳမျဖစ္ခင္က ရည္းစားထား ၊ ဆင္းရဲသားက သူေဌးေယာင္ေဆာင္အ၀တ္ေျပာင္မွ လူ႐ိုေသ ၊လင္ရွိမယားက အပ်ိဳလုပ္မသာပို႕ရင္း အပ်ိဳလွည့္ ၊အလွဴေပးရင္း ထမင္းေရာင္းဆယ္ႏွစ္သမီးက အိမ္ေထာင္က် […]
ဓါး၊လှံ၊လက်နက်နဲ့ ပိုပြင်းတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့အဆိပ်
ဓါး၊လှံ၊လက်နက်နဲ့ ပိုပြင်းတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့အဆိပ် နှုတ်ဖျားကထွက်လာတဲ့စကား ဆိုပေမယ့်နှလုံးသားနဲ့ ခံစားနားထောင်သူအဖို့အကြိမ်ကြိမ်သေရတယ်။ အသားမှာ ဒဏ်ရာမပေါ်ပဲနှလုံးသားထဲထိ နာကျင်အောင်လုပ်နိုင်တာကတော့နှုတ်ဖျားက စကားလုံးတွေပါပဲ။ပြောသမျှစကားကိုနားဝတင်မဟုတ်ပဲနှလုံးသားနဲ့ နားထောင်မိသူတွေကတခြားသူတွေထက် ပိုခံစားရပါတယ်။ လူချင်း မမြင်မတွေ့ရပါပဲph တည်းက တစ်ဘက်လူရဲ့အသံအနေအထား လေယူလေသိမ်းကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်း ဝမ်းနည်းမှု နဲ့ဒေါသထွက်နေသလား ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ စကားလုံးတွေကို နားထောင်ခံစားသူတိုင်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ချို့စကားလုံးတွေကပြောလိုက်တဲ့သူကအမှတ်မထင် ပြောထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားနာရသူအတွက်တော့ ခံစားရစေပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ရင့်ရင့်သီးသီး နာကျင်အောင်မာနတွေရစရာမရှိတော့လောက်အောင်ချိုးနှိမ်ပြောဆိုပြီးမှသူတို့မဟုတ်တော့သလိုအလွယ်တကူ မေ့ပစ်လိုက်ကြတယ်။တစ်ဘက်လူရဲ့ခံစားမှု နာကျင်မှုကိုသူတို့အရေးမစိုက်ဘူး။ပြောပြီး ပြီးသွားတယ် ထင်ကြတယ်။ ကြမ်းကျွံရင် နှုတ်လို့ လွယ်ပေမယ့်စကားကျွံရင် […]
နောက် ၄၈နာရီအတွင်း မိုးကြီးမည့်ဒေသများ ပေါက် မြိုင် မြစ်ခြေ ပခုက္ကူ ရေစကြို မြင်းခြံ မြောင် ချောင်းဦး ဆားလင်းကြီး ယင်းမာပင် ပုလဲ မင်းတိုင်ပင် ကနီ ဘုတလင် ဒီပဲယင်း ကံထူးမ တန့်ဆည် ရေဦး ရွှေဘို အရာတော် လှတော ဝက်လက် ဟံလင်း မတ္တရာမန္တလေး အုန်းချော အနီးစခန်း မေမြို့ ရွာငံ မြို့ကြီး ပင်းတယ တောင်ကြီး ကလော […]